ရနျကုနျတှငျ ဟိုတယျတဈခု ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ Wyndham သညျ လာမညျ့နှဈမြားအတှငျး ဟိုတယျဖှငျ့ပှဲ ၁၂၈ ခုကို စီစဉျရနျရှိသညျ - Myanmar Builders Guide
အခနျးပေါငျး ၃၀၀၀၀ နီးပါး ထပျမံတိုးခြဲ့ရနျ စီစဉျထားသညျ။
ဟိုတယျ ၁၂၈ လုံးနှငျ့ အခနျးပေါငျး ၂၈၇၅၈ ကို ဖွညျ့ထညျ့မညျ့ Wyndham သညျလာမညျ့နှဈမြားအတှကျ ကွီးမားသော အစီအစဉျမြား ရှိနသေညျ။
COVID-19 ပွနျ့ပှားမှုသညျ ဤစီမံကိနျးအခြို့ကို နောကျကစြပွေီး ဖှငျ့ပှဲမြားကို နှောငျ့နှေးစခေဲ့သညျ။ သို့သျော ၎င်းငျးWyndham သညျ အကောငျးမွငျထားသညျ။
စီစဉျထားသော အဆောကျအအုံ ၁၂၈ အနကျ ၅၆ ခုသညျ ၂၀၂၀ ခုနှဈတှငျ ဖှငျ့လှဈရနျနှငျ့ အခနျးပေါငျး ၁၂,၂၄၁ ခနျး ဖွညျ့ထညျ့ရနျ ဖွဈသညျ။ COVID-19 ဖွဈပှားမှုကွောငျ့ ဤစီမံကိနျးအမြားစုသညျ ၂၀၂၀ ခုနှဈတှငျ ရှဆေို့ငျးလိုကျပွီး လာမညျ့နှဈသို့ ပွောငျးရှခေဲ့ရသညျ။
၂၀၁၂ ခုနှဈတှငျ ဟိုတယျ ၃၁ ခု ရှိလာမညျဖွဈပွီး အခနျးပေါငျး ၆၉၉၅ ရှိမညျ ဖွဈသညျ။
နောကျထပျ ဟိုတယျ ၁၇ ခုကို ၂၀၂၂ တှငျ ဖှငျ့လှဈမညျ။ နောကျထပျ ၂၄ ခုကို ၂၀၂၃ခုနှဈနှငျ့ ထိုနှဈနောကျပိုငျးတှငျ ဖှငျ့လှဈမညျ ဖွဈသညျ။
Wyndham ဟိုတယျလုပျငနျးစုသညျာအာရှပစိဖိတျဒသေအတှငျး တိုးခြဲ့ရနျ စူးစိုကျထားသညျ။ သို့ဖွဈရာ လာမညျ့နှဈအနညျးငယျအတှငျးဟိုတယျအသဈ ၇၀ ကို ဖှငျ့လှဈလိမျ့မညျဖွဈပွီး အခနျးပေါငျး ၁၆,၃၀၄ ပါ ၀ ငျသညျ။
ဒုတိယဖွဈသော တောငျအမရေိကတိုကျတှငျ ဟိုတယျ ၂၁ ခု နှငျ့ အခနျးပေါငျး ၃၈၃၂ ခနျးဖွငျ့ လုပျကိုငျသှားမညျ?
တတိယဖွဈသော မွောကျအမရေိကတှငျ ဟိုတယျအသဈ ၁၅ လုံးကို အခနျးပေါငျး ၄၄၀၀ ဖွငျ့ လုပျကိုငျသှားမညျ ဖွဈသညျ။
အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေတှငျ ဟိုတယျအသဈ ၁၀ ခုကို လညျးကောငျး ၊ ဥရောပတှငျ ဟိုတယျအသဈ ၇ ခုကိုလညျး ဖှငျ့လှဈမညျဖွဈပွီး အာဖရိကတှငျလညျး ဟိုတယျ ၅ လုံးကို ဖှငျ့လှဈမညျ။
အဆိုပါ ဟိုတယျမြား အားလုံးကို Wyndham အမညျအမှတျတံဆိပျ သုံးစှဲသှားမညျ ဖွဈသညျ။
Wyndham ၏ထိပျတနျး ၅ နိုငျငံ
Wyndham ၏ထိပျတနျး ၅ နိုငျငံတှငျ အာရှမှ သုံးနိုငျငံ ပါဝငျသညျ။
ဟိုတယျ ၃၁ ခု ၊ အခနျး ၇,၆၀၈ ခနျးဖွငျ့ တရုတျက ဦး ဆောငျနသေညျ။ အိန်ဒိယတှငျ ဟိုတယျ ၉ လုံးနှငျ့ ဗီယကျနမျတှငျ ဟိုတယျ ၆ လုံး ပိုငျဆိုငျထားသညျ။
အာဂငျြတီးနားသညျ ဟိုတယျ ၁၂ ခုနှငျ့အခနျးပေါငျး ၁၀၄၆ ခနျးဖွငျ့ ဒုတိယနရောတှငျ ရပျတညျနသေညျ။ အမရေိကနျပွညျထောငျစုက ဟိုတယျအသဈ ၁၀ လုံးနှငျ့အခနျးပေါငျး ၃၀၀၉ ဖွငျ တတိယ နရောတှငျ ရှိသညျ။
လကျရှိလုပျဆောငျနသေော အကွီးမားဆုံးစီမံကိနျးမှာ Kentucky၊ Louisville ရှိ အခနျး ၁,၂၉၄ ခနျး Galt House ဟိုတယျကို ပွနျလညျပွုပွငျမှမျးမံခွငျးဖွဈသညျ ။ အခနျးမြားကို ပွနျလညျပွုပွငျမှမျးမံပွီး လကျရှိထမငျးစားခနျးမြားကို ခတျေမီအောငျလုပျမညျ။ ဟိုတယျ အနောကျပိုငျးမြှျောစငျတှငျ လသောဆောငျထိုငျခုံမြားနှငျ့ ရှုခငျးပါသော စားသောကျဆိုငျအသဈတဈခု ဖှငျ့လှဈထားရှိမညျဖွဈသညျ။
ရန်ကုန်တွင် ဟိုတယ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Wyndham သည် လာမည့်နှစ်များအတွင်း ဟိုတယ်ဖွင့်ပွဲ ၁၂၈ ခုကို စီစဉ်ရန်ရှိသည်
Wyndham သည် အာရှပစိဖိတ် ဒေသကိုအထူးအာရုံစိုက်ပြီး လာမည့်နှစ်များအတွင်း အခန်းပေါင်း ၃၀၀၀၀ နီးပါး ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် စီစဉ်ထားသည်။
ဟိုတယ် ၁၂၈ လုံးနှင့် အခန်းပေါင်း ၂၈၇၅၈ ကို ဖြည့်ထည့်မည့် Wyndham သည်လာမည့်နှစ်များအတွက် ကြီးမားသော အစီအစဉ်များ ရှိနေသည်။
COVID-19 ပြန့်ပွားမှုသည် ဤစီမံကိန်းအချို့ကို နောက်ကျစေပြီး ဖွင့်ပွဲများကို နှောင့်နှေးစေခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းWyndham သည် အကောင်းမြင်ထားသည်။
စီစဉ်ထားသော အဆောက်အအုံ ၁၂၈ အနက် ၅၆ ခုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် အခန်းပေါင်း ၁၂,၂၄၁ ခန်း ဖြည့်ထည့်ရန် ဖြစ်သည်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဤစီမံကိန်းအများစုသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီး လာမည့်နှစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဟိုတယ် ၃၁ ခု ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး အခန်းပေါင်း ၆၉၉၅ ရှိမည် ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် ဟိုတယ် ၁၇ ခုကို ၂၀၂၂ တွင် ဖွင့်လှစ်မည်။ နောက်ထပ် ၂၄ ခုကို ၂၀၂၃ခုနှစ်နှင့် ထိုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သည်။
Wyndham ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစုသည်ာအာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း တိုးချဲ့ရန် စူးစိုက်ထားသည်။ သို့ဖြစ်ရာ လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဟိုတယ်အသစ် ၇၀ ကို ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး အခန်းပေါင်း ၁၆,၃၀၄ ပါ ၀ င်သည်။
ဒုတိယဖြစ်သော တောင်အမေရိကတိုက်တွင် ဟိုတယ် ၂၁ ခု နှင့် အခန်းပေါင်း ၃၈၃၂ ခန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်သွားမည်?
တတိယဖြစ်သော မြောက်အမေရိကတွင် ဟိုတယ်အသစ် ၁၅ လုံးကို အခန်းပေါင်း ၄၄၀၀ ဖြင့် လုပ်ကိုင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ဟိုတယ်အသစ် ၁၀ ခုကို လည်းကောင်း ၊ ဥရောပတွင် ဟိုတယ်အသစ် ၇ ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အာဖရိကတွင်လည်း ဟိုတယ် ၅ လုံးကို ဖွင့်လှစ်မည်။
အဆိုပါ ဟိုတယ်များ အားလုံးကို Wyndham အမည်အမှတ်တံဆိပ် သုံးစွဲသွားမည် ဖြစ်သည်။
Wyndham ၏ထိပ်တန်း ၅ နိုင်ငံ
Wyndham ၏ထိပ်တန်း ၅ နိုင်ငံတွင် အာရှမှ သုံးနိုင်ငံ ပါဝင်သည်။
ဟိုတယ် ၃၁ ခု ၊ အခန်း ၇,၆၀၈ ခန်းဖြင့် တရုတ်က ဦး ဆောင်နေသည်။ အိန္ဒိယတွင် ဟိုတယ် ၉ လုံးနှင့် ဗီယက်နမ်တွင် ဟိုတယ် ၆ လုံး ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
အာဂျင်တီးနားသည် ဟိုတယ် ၁၂ ခုနှင့်အခန်းပေါင်း ၁၀၄၆ ခန်းဖြင့် ဒုတိယနေရာတွင် ရပ်တည်နေသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဟိုတယ်အသစ် ၁၀ လုံးနှင့်အခန်းပေါင်း ၃၀၀၉ ဖြင် တတိယ နေရာတွင် ရှိသည်။
လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော အကြီးမားဆုံးစီမံကိန်းမှာ Kentucky၊ Louisville ရှိ အခန်း ၁,၂၉၄ ခန်း Galt House ဟိုတယ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြစ်သည် ။ အခန်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး လက်ရှိထမင်းစားခန်းများကို ခေတ်မီအောင်လုပ်မည်။ ဟိုတယ် အနောက်ပိုင်းမျှော်စင်တွင် လေသာဆောင်ထိုင်ခုံများနှင့် ရှုခင်းပါသော စားသောက်ဆိုင်အသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။